विद्यालय तहमा आयुर्वेद : के हो आयुर्वेद ? किन पढ्ने ?
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, वैशाख ३०
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहमा आयुर्वेद पढाइ हुने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आयुर्वेद कक्षा ९ र १० को ऐच्छिक विषयमा राखेको छ । आयुर्वेद के हो ? किन पढ्ने ? यसको महत्त्व के छ ? यसबारे हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौँ ।
आयुर्वेद आयु र वेद मिलेर बनेको छ । आयु भनेको जीवन, वेद भनेको शास्त्र । जुन शास्त्रमा जीवनको विषयमा वर्णन गरिएको हुन्छ, त्यो आयुर्वेद हो । आयु पनि ४ प्रकारका हुन्छन् । हित आयु, अहित आयु, सुख आयु र दु:ख आयु । आयुर्वेदमा आयुलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
ब्रह्माले उत्पत्ति गरेका
मनुष्यको उत्पत्ति हुनु पहिले नै जडिबुटीहरू थिए । आयुर्वेदको उत्पत्ति ब्रह्माले गरेको भन्ने विश्वास गरिन्छ । मान्छेको उत्पत्तिपछि स्वस्थ रहन आयुर्वेदको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । इसापूर्व ४-५ हजार वर्षअघि हिन्दु धर्मको वेदमा पनि यसबारे लेखिएको छ । वेदमा स्वास्थ्य रहनका लागि बिरामी भएपछि केके गर्ने भनेर ग्रन्थ बनाइयो । त्यही ग्रन्थ नै आयुर्वेद हो ।
आयुर्वेदको कुनै पनि किताब पाइँदैन तर चरक र सुश्रुतसंहिता भन्ने किताब छन् । त्यसमा गणित विषयलाई नै आयुर्वेद भनिएको हो । त्यस समयमा स्वास्थ्य जीवन जिउने कला र बिरामी भएपछि औषधिका रूपमा जडिबुटीको प्रयोग गरिन्थ्यो । अहिलेको मानसिकतामा आयुर्वेद भनेको जडिबुटी भन्ने बुझाइ छ । त्यो होइन । आयुर्वेद भनेको जीवन जिउने विज्ञान हो ।
सम्पूर्ण जीवन पद्धति
आयुर्वेद भनेको चिकित्सा पद्धति मात्र नभएर सम्पूर्ण जीवन पद्धति हो । आयुर्वेदले एलोप्याथिक वा होमियोप्याथिक कुनै पनि प्याथीको कुरा गर्दैन । जीवन जिउने पद्धतिको कुरा गर्छ । आयुर्वेदले मान्छेको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक शिक्षाको कुरा गर्छ । बिहान कति बजे उठ्ने ? कस्तो व्यवहार गर्ने ? कस्तो खानपिन अपनाउने ? स्वस्थ जीवनशैली के हो ? कसरी स्वस्थ रहने ? यी विषय आयुर्वेदले सिकाउँछ ।
११औँ शाताब्दीसम्म आयुर्वेदको विकास
इसापूर्व २ सयदेखि ५ सयसम्म आयुर्वेदको चरम प्रयोग गरिएको थियो । त्यसबेला सर्जरी पनि भएको थियो । भगवान् बुद्धको पनि आयुर्वेद पद्धतिबाट नै उपचार भएको थियो । ११औँ शाताब्दीसम्म पनि राम्रो थियो । त्यसपछि चिकित्सा पद्धति घट्दै गयो । व्रिटिसहरू भारत वर्षमा आएपछि आयुर्वेदको प्रयोग कम हुँदै गयो । आधुनिक उपचार पद्धतिको विकास हुन थाल्यो । आधुनिक उपचार पद्धति पनि आयुर्वेदबाट नै आएको हो ।
विद्यालय तहमै आयुर्वेद
विद्यालय तहबाट नै आयुर्वेद पढाउनुपर्छ ,जसले गर्दा बालबालिकाले आफ्नो जीवनशैली कस्तो बनाउने हो, त्यो जान्न र सिक्न पाउँछन् । ठूलालाई आदर, सानालाई माया, सरसफाई, बिहान छिटो उठ्ने, मानसिक स्वास्थ्यका लागि ध्यान गर्ने, योग गर्ने कुरा विद्यालय तहमै सिकाउनुपर्छ । रोग लागिहाल्यो भने प्रारम्भिक अवस्थामा घर वरिपरि पाइने जडिबुटीबाट औषधि बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यो सिकाउन सकिन्छ ।
बेसार, लसुन, अधुवा, हर्रोलगायत जडिबुटीबाट हर्बल औषधिबारे बुझाउन सकिन्छ, जसले प्राथमिक उपचारमा सहयोग मिल्छ । यसको सिद्धान्त भनेको व्यक्तिले पहिले आफ्नो स्वास्थ्यलाई रक्षा गर्नु हो । बिरामी हुन नदिनु नै मुख्य उद्देश्य हो । यदि रोग लाग्यो भने साइड इफेक्ट नहुने गरी उपचार गर्नु आयुर्वेदको सिद्धान्त हो ।
नेपालमा अनुसन्धान छैन
आयुर्वेदमा नेपाल पछाडि परेको छ । अध्ययन अनुसन्धान हुन पाएको छैन । नसर्ने रोगका बिरामी धेरै छन् । ९० प्रतिशत मान्छे नसर्ने रोगका कारण मर्छन् । क्यान्सर, डाइबिटिजलगायतका बिरामी धेरै हुन्छन् । यी रोग हाम्रो जीवनशैलीका कारण लाग्ने हो तर हिजोआज अहिले खाएर अहिले नै रिजल्ट खोज्न थालेका छौँ । त्यसैले आयुर्वेद पछाडि परेको हो तर लोप भने भएको छैन । मान्छे सचेत पनि भएका छन् । रोगसँग लड्ने शक्ति पनि जडिबुटीमा पाइन्छ ।
ज्वानो, मेथी, जिरा, बेसार हालेर तरकारी पाइन्छ । त्यसैले जहिलेसम्म पानी, दाल, भात खाइन्छ, तबसम्म जडिबुटी रहिरहन्छ । ब्रेड मात्र खान थाल्यौँ भने त्यो बेला आयुर्वेद रहँदैन । सकारात्मक जीवनशैली नै आयुर्वेद हो । अबको अबको पुस्ता यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।
आयुर्वेद पढेर के बन्ने ?
नेपालमा प्रमाणपत्र तह, स्नातक, स्नातोकत्तरसम्म आयुर्वेदको पढाइ हुन्छ । पीएचडीका लागि भने भारत नै जानुपर्ने हुन्छ । अब विद्यालय तहमा पनि आयुर्वेदको पढाइ हुने भएको छ । यो खुसीको कुरा हो ।
आयुर्वेद पढेर के बन्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । आयुर्वेद पढेर अरूलाई ठीक बनाउने हो । वैद्य, डाक्टर बन्ने हो । चिकित्सकीय व्यापारी बन्न सकिन्छ । त्यससँगै सरकारी क्षेत्रमा पनि राम्रो अवसर छ । आयुर्वेद पढेर जडिबुटीको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।
कुनकुन देशमा पढ्न पाइन्छ आयुर्वेद ?
मुख्यगरी नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा आयुर्वेदको पढाइ हुन्छ । भारतमा त आयुर्वेदको मन्त्रालयसमेत छ । त्यस्तै, माल्दिभ्स, म्यानमार, जापानलगायतका देशमा पनि आयुर्वेदको राम्रो पढाइ हुन्छ । जर्मनीले इन्डियासँग मिलेर अनलाइनबाटै आयुर्वेद पढाइरहेको छ भने अन्य देशहरूले पनि आयुर्वेदको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
आयुर्वेदले देशलाई के दिन्छ ?
अहिलेको समयमा आयुर्वेदको महत्त्व धेरै छ । कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लाग्न सकेको छैन । विश्वमा नपाइने जडिबुटी नेपालमा पाइन्छन् । यदि अनुसन्धान गरेर कोरोनाको औषधि ल्याउन सक्यो भने त्यसभन्दा ठूलो देशका लागि के हुन्छ ? अनुसन्धान गरेर देशको नाम चिनाउने अवसर पनि यसैमा छ । त्यसैले अनुसन्धानका लागि लगानी आवश्यक छ । अनुसन्धानको दायर बढाउने हो भने नेपालमा आयुर्वेदको प्रचुर सम्भावना छ ।
(आयुर्वेदविज्ञ एवं आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायसँग शिलापत्रकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित )
के हो संस्कृत ? किन पढ्ने ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७, १५:४२:००